Garee Cimaa torbee kanaa keessa Obamaayaangi, Saalaah fi Mikitaariyaan galaniiru - BBC News Afaan Oromoo
Garee Cimaa torbee kanaa keessa Obamaayaangi, Saalaah fi Mikitaariyaan galaniiru
Piyeer-Emeriikk Abamaayaangi Arsenaal waliin goolii lakkoofsisuun jalqabeera, Maanchester Siitiin taphoota hanga ammaatti taphateen si'a afraffaa qabxii gateera. Kan haala diramaa fakkaatuun Liiveerpuul waliin walqixa ba'uu danda'e Tootinhaam addabbii peenaaliitii lama argateera.
Aata'u malee garee koo torban kanaatiif taphattoota eenyufaatu cimee mullate? Atis 11 kee warraa gaazexeessaa Ispoortii BBC tiin filataman keessaa filadhuu hiriyyoota keef qoodi.
Goolii eegaa - Edersaan (Maanchester Siitii)
Tapha baranaa keessatti goolii eegdota si'a shan Piriimer Liigii taphatan keessaa Edersaan %85 oolchuun hunda caala.
Dirree Barnileetti taphateen Maanchester Siitiin akka 1-1 walqixa ba'uuf Edersaan kan Been Mee irraa dhufe oolcheera. Aata'u malee, gara taphichaa yeroo daqiiqaa 38 irra jiruuttan isin deebisa.
Nikoolaas Otaamendiin Edersaanitti kubbaa deebisee kennee battalumaan taphataa Baarnilee Ashilii Baarneesiin dhiibbaan irra ga'eera. Goolii eegaan lammii Biraazil kun Baarnes itti dhufuu isaa osoo hin yaadda'iin, gara Viinseenti Kompaaniitti dabarseera.
Ittisaa - Jaak Isteefensi (Saawuuzhaampitan)
Jaak Isteefensi taphoota Piriimer Liigaa keessatti taasiseen walitti aansuun Biraayteeniifi Weesti Biroom irraatti goolii lakkoofsiseera
Walakkaa torban kanaa keessa tapha Saawuuzhaampieen Weesti Biroom waliin taasiseen gooolii bareedaa Jaak Isteefensi lakkoofsiseen warri Saawuuzihaampteen xumura gaarii argataniiru.
Ittisaa - Been Mee (Barnileey)
Been Mee kubbaa hedduu deebisuun hanga (170) miillaan (116) ammoo mataadhaan deebisee fageessuun taphataan Barnilee kamiyyu hin raawwanne tapha baranaa kana keessatti agrsiiseera.
Manaajerri Maanchester Siisii Peep Gaardiyoolaa dhuma taphaarratti ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin Barnileen kilaboota Piriimer Liigii Ingliiz keessaa cimaadha jechuun dubbatan.
Tapha Sanbata darbee kanaraatti Been Mee cimina agrasiiseen cimaa ture.
Ittisaan kun yeroo sarara addabbii keessaa ittisuuf dirree warra Siistiitti ce'ee sodaachisu waluma qixa bu'a qabeessa ture.
Ittisaa - Daanilloo (Maanchester Siitii)
Daanilloon erga Piriimer Liigiin jalqabame si'a lama goolii lakkoofsisseera, kunis bara 2015/16 kan Riyaal Maadiriidiif lakkoofsise waliin waliqixeesseeraa jechuudha.
Taphataan Biraazili kun maal akka hojjetu waan beekuuf kubbaa fudhatee ce'e dhaabee bilcheessee rukkutuun Niik Poop dabarsee lakkoofsise. Baayyees bareedaa ture.
Sarara Gidduu - Heenriik Mikitaariyaan (Arsenaal)
Carraawwan sadan Heenriik Mikitaariyaaniin Arsenaaliin uumaman hunduu gara gooliitti jijjiiramaniiru. Piriimeer Liigii keessatti erga bara 2013 tapha Wiigaan waliin tapha tokko keessatti kubbaa afur mijeessuun Saantii Kaazorlaa kennee booda kan Mikitaariyaan kun isa jalqabati.
Ani Mikitaariyaaniin Morusiyaa Doortimoonditti nan jaalladha. Maanchester Yunaayitid keessattis nan jaalladha. Kan inni Arsenaaliif tapha Everten waliin taasise irratti agrsiise garuu nan dinqisiifadha.
Mokitaariyaaniifi Abumaayaangi lamaan isaanii taphattoota Doortumoondu duraanii turan, yerooma tokko ammo Arsenaaliin dhufan.Tokko dhufuun kan biraa irratti dhiibbaa fuduun isaa hin oolu.
Sarara Gidduu - Maariyoo Lemiinaa (Saawuuzhaampiteen)
Maariyoo Lemiinaa, taphataan ggoolii Piriimeer Liigii irraatti Sanbata darbe lakkoofsise kun Daani'eel Kaaziniifi Didiyeer Nidoongiitti aanaa Gaaboonirraa taphataa sadaffaadha.
Raawwii inni Weesti Birrm waliin taasise ajaa'ibsiisaa ture. Cimina akkasii kana hin argine turree kanaaan dura, amma garuu bakka sirrii galchuun argaa jirra.
Sarara Gidduu - Aaron Raamsee (Arsenaal)
Piriimeer Liigii keessatti Aaroon Raamseen Arsenaaliif hatiriikii hojjechuun nama 20ffaadha.
Taphataan addunyaa warra Weelsi Aaroon Raamsee, tapha Arsenaal Siwaansii waliin yeroo darbe mo'amee osoo hamilee hin dhabiin, garee Everteen ga'umsa gadi aanaa agarsiisaa jiranirratti goolii sadii lakkoofsisuun hatiriikii hojjeteera.
Sarara Gidduu - Fowussenii Diyabaat (Leester)
Fowussenii Diyabaat Leesteriif jalqaba taphaa lamarraa goolii lama lakkofsiseera.
Leester Siitiin Riyaad Mahaarex haarawaa argatan jechuun ni mala sababiin isaas Mahaarez kanaan booda ni taphataaf jedhee yaaduu hin danda'u.
Taphataan akka Diyaabat kana ilaaluu caalaas kan nama gammachiisu hin jiru.
Sarara Fuulduraa - Mohaammed Saalaah (Liiverpuul)
Mohaamed Saalaah Piriimeer Liigii keessatti taphoota 25 keessatti gooliiwwan 21 lakkoofsiseera. Kunimmoo taphaa muraasa keessatti goolii 20 ol lakkoofsisuun Liiverpuuliif isa jalqabaa isa taasisa.
Gooliin baayyeen babbareedoon ni jiru garuu tapha Liiverpuuliifi Tootinhaam 2-2 walqixee ba'an keessatti gooliin Mohaammed Saalahaa lammaffaa kaneen kessaa tokkodha.
Gooliin Saalaaha inni duraas baayyee ajaa'iba.
Sarara Fuulduraa - Piyeer-Emeeriik Obaamaayaangi (Arsenaal)
Piyeer-Emeerik Aboomayaangi waliigalatti gooliiwwan 12 liigota gurguuddoo Awurooppaaf (Boorsiyaa Doortimundiifi Arsenaaliif) lakkofsiseera. Ediisen Kaavaaniifi Rooberti Lewaanduskii (13) lakkoofsisuun caalaa lakkoofsisuu danda'aniiru.
Sanbata darbe sochiin Aboomaayaangi tapha Arsenaal Everteen waliin taasise irratti agrasiise fakkeenyummaa gaariidha.
Sarara Fuulduraa - Joosee Izquyerdoo (Biraayteen)
Gooliiwwan shaman Piriimeer Liigii Joosee Izquyiredoo keessatti tibba kanaa qooda fudhate keessaatti fudhate keeaa afur dirree isaaniirratti yoo ta'u (lama goolii, lama kennuudhaan ture).
Biraayiteen Piriimeer Liigii keessatti nama goolii lakkoofsisu cimaa hin qaban ture, ta'us garuu morkataa salphaa hin taane.